Orthodontic Treatment – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
မွနျမာနိုငျငံတှငျ အရှိနျအဟုနျဖွငျ့ခတျေစားလာသော အလှအပဆိုငျရာ သှားနှငျ့ခံတှငျးကုသမှု (သို့မဟုတျ) သှားညှိကုသမှု အကွောငျး တစတေ့စောငျး (အပိုငျး-၂)
ဘယျအသကျအရှယျမှာ သှားညှိကုသရငျ အကောငျးဆုံးလဲ?
မေးရိုးပွငျဖို့ရာ ဘယျလိုလူတှမှော လိုအပျပါသလဲ?
မေးရိုးခှဲစိတျကုသပွီး မေးရိုးပွငျဖို့လိုအပျတဲ့လူနာအမြားစုက အောကျမေးရိုးရှထှေ့ကျနပွေီး အောကျသှားကနေ အပျေါသှားကို ပွောငျးပွနျအုပျပွီး ကိုကျနတေဲ့ သှားအမြိုးအစားပိုငျရှငျတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ ပုံမှနျသှားတှမှောဆို အပျေါသှားက အောကျသှားကို အုပျမိုးပွီး ကိုကျနပေမေယျ့ သူတို့က ပွောငျးပွနျဖွဈနပေါတယျ။ အကွောငျးရငျးအမြားစုကတော့ အောကျမေးရိုးက ရှကေို့ရှညျထှကျနလေို့ဖွဈပါတယျ။
Dr.Sai T S
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ခေတ်စားလာသော အလှအပဆိုင်ရာ သွားနှင့်ခံတွင်းကုသမှု (သို့မဟုတ်) သွားညှိကုသမှု အကြောင်း တစေ့တစောင်း (အပိုင်း-၂)
ဘယ်အသက်အရွယ်မှာ သွားညှိကုသရင် အကောင်းဆုံးလဲ?
မေးရိုးပြင်ဖို့ရာ ဘယ်လိုလူတွေမှာ လိုအပ်ပါသလဲ?
မေးရိုးခွဲစိတ်ကုသပြီး မေးရိုးပြင်ဖို့လိုအပ်တဲ့လူနာအများစုက အောက်မေးရိုးရှေ့ထွက်နေပြီး အောက်သွားကနေ အပေါ်သွားကို ပြောင်းပြန်အုပ်ပြီး ကိုက်နေတဲ့ သွားအမျိုးအစားပိုင်ရှင်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်သွားတွေမှာဆို အပေါ်သွားက အောက်သွားကို အုပ်မိုးပြီး ကိုက်နေပေမယ့် သူတို့က ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပါတယ်။ အကြောင်းရင်းအများစုကတော့ အောက်မေးရိုးက ရှေ့ကိုရှည်ထွက်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်။